FAQ - Beijing SINOVO International Trade Co., Ltd.
F1: azonao ekena ve ny fanaingoana azy?
A1: Eny, manana ekipa mpikaroka momba ny teknika sy fampandrosoana manokana izahay. Manana fahaizana ampy hamoronana endrika sy hamokarana ilay milina amin'ny firafitry ny fizotrany sy ny fikorianan'ny rafitra arakaraka ny takian'ny mpanjifa isika.
F2: Inona ny fe-potoana fandoavanao vola?
A2: Fe-potoana fandoavam-bola: 100% T / T mialoha na 100% L / C tsy azo ivalozana amin'ny banky iraisam-pirenena eken'ny SINOVO.
F3: Inona ny antoka omen'ny mpanamboatra anao?
A3: 12 volana avy amin'ny fandefasana. Ny Warranty dia manarona ampahany lehibe sy singa.
Raha ny lesoka sy ny lesoka avy amin'ny volavolanay na ny fanamboaranay dia hosoloinay ireo singa simba ary hiantohana ny fanampiana ara-teknika eo amin'ny tranokala tsy misy sarany ho an'ny mpanjifa izahay (afa-tsy ny adidy manokana sy ny fitaterana an-tanety). Ny fiantohana dia tsy manarona ampahany azo lany sy mitafy toy ny: menaka, solika, gasket, jiro, tady, fuse.
F4: Inona ny entana fonosanao?
A4: manondrana fonosana mahazatra, mety amin'ny fandefasana ranomasina matihanina sy rivotra
F5: Ahoana ny serivisinao aorian'ny fivarotana?
A5: Handefa injenieran'ny serivisy matihanina any amin'ny toeram-piasan'ny mpanjifa izahay, izay mamatsy, manofana serivisy ary manao fitsapana fandavahana lavaka voalohany; ho an'ny rigs nitaingina kodiarana CAT, ny masininay dia afaka mankafy serivisy manerantany amin'ny serivisy CAT eo an-toerana.
F6: Na manome masinina efa niasa ianao?
A6: Azo antoka fa manana milina efa niasa maro isika izay amidy amidy.
F7: nahoana ianao no tokony hividy aminay fa tsy amin'ny mpamatsy hafa?
A7: (1) Professional & Effficient, Customer Focus, Integrity, Win-win fiaraha-miasa;
(2) Vidiny mifaninana & ao anatin'ny fotoana fitarihana fohy indrindra;
(3) Serivisy teknika any ivelany
F8: Mitsapa ny entanao rehetra alohan'ny fanaterana ve ianao?
A8: Eny, manana fitsapana 100% izahay alohan'ny fanaterana. Ary hapetakay ny tatitra ataontsika isaky ny masinina.
F9: Manana mari-pankasitrahana ho an'ny masininao ve ianao?
A9 .: Ny vokatray rehetra miaraka amin'ny mari-pahaizana momba ny CE, ISO9001.
F10: Raha te hahita masoivoho eo an-toerana ianao?
A10: Ie, mahita mpiasa matihanina izahay, raha mahaliana anao, pls mifandray aminay amin-kalalahana.